TTSweet: စင်္ကာပူ အမှတ်တရ Kway Chap
Posted by T T Sweet at 1:55 PM
The best Kway Chap I'd ever been eat was from Bangkok near Victory Monument, under the BTS overhead bridge. The taste better than Pasir Panjang. Btw, for soup base they put five spice plus white reddish chunks to absorb all the smell from pork. Well, eat with dry chili powder and Cap Muu (crispy pork skin)..... very yummy!
T T Sweet March 28, 2012 at 2:44 PM
ကွေးချပ်ကို မလေးရှား (သို့) စင်္ကာပူ base အစားအစာလို့ ထင်ထားတာ။ ယိုးဒယားမှာလဲ ရတယ်ဆိုတာ မနေ့က အင်တာနက်ထဲ လိုက်မွှေရင်းနဲ့ တွေ့လိုက်ပါတယ်။ စင်္ကာပူက ကွေးချပ်နဲ့ အတူတူ ပဲလားတော့မသိဘူး။ အမှန်က တရုတ်ကစတဲ့ အစာနဲ့တူတယ်နော်။ ဘယ်က အစလဲဆိုတာ Google မှာလဲ မတွေ့ဘူး။
Phoo Ei March 28, 2012 at 3:07 PM
တီဆွီရေ... ကွေးချပ်ကို ဒီကထိုင်းဆိုင်တွေမှာတွေ့ဘူးတယ်...singapore ကဟာနဲ့တူလားတော့မသိဘူး... city က chat thai ဆိုတဲ့ဆိုင်မှာ... အူကတော့အိမ်မှာလုပ်တာလောက်တော့မများဘူးပေါ့... နည်းပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပဲနော်တီဆွီ =]
super like! TT SWEET. I didn't like kway chap at first too so i used to order with yum rice. But kway chap is one of my favourites now. :D
Anonymous March 28, 2012 at 6:07 PM
aww ချစ်မကြီး ဆု ကိုမညှာဖူး။။ ဒီမှာ ၇၈၆ နိုင်ငံဆိုတော့ ရှား တယ်။ ၀က်သားတော့ဝယ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၀က်သား မချက်တတ်ဖူး အိမ်မှာတုံး ကအမေ တို့က ၀က်သားမစား ဖူးလေ။ အဲတော့ ဆု လဲ မချက်ဖူး။။ သူးများချက်ရင်တော့ လာထား ပဲ။။ ဟီးဟီး
အဲ့ဒီအူကို အူပိတ်လို့ခေါ်ပါတယ် Large intestine လို့ဒီမှာတော့ရေးတတ်တယ်။
အူအသေးလေးတွေကို အူချို ခေါ်ပြီး small intestine လို့ရေးတတ်တယ်
မနံအောင် ဆား၊ သံပုရာသီးနဲ့အတူရေနွေးနဲ့ အခါခါပွတ်ဆေးပြီး နာနတ်ပွင့်ဘာညာဆမကလာပါတဲ့ ရှားကောပါးကောလေးနဲ့ နပ်ထားလိုက်ရင် အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။
အိမ်မှာတော့ အူချက်ရင် လူတိုင်းထမင်းသိပ်စားနိုင်ကြလို့ မချက်ပဲနေတာကြာပြီ အဆီတက်တယ်ဆိုတာကိုး
ဒါပေမယ့်လည်း ကြိုက်နေတာက ခက်တယ်..:P
တီဆွိ့ blog ကိုအားပေးနေတာကြာပါပီ။၁ခုလောက်တောင်းဆိုချင်လို့ပါ။ တီဆွိက mechanical engineer ဆိုတော့ ရန်ကုန်က ME ပြီးပြီးတော့ စလုံးမှာလာ အလုပ်ရှာ သို့ သင်တန်းတက်ချင်တယ့်သူတွေ အတွက် basic requirements လေးတွေအကြောင်း အဆင်ပြေရင် blog တစ်ပိုစ်လောက် တောင်းဆိုတာပါ။
ညီမလည်း စင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ် ကျောင်းတက်နေတာ ၃နှစ်လောက်ရှိပါပီ။ Software Engineer ဆိုတော့ ME တွေဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ် ဆိုတာ သေချာမသိပါဘူး။ ရန်ကုန်ပြန်တိုင်း မောင်ဝမ်:ကွဲတွေက အဲ့ဒါနဲ့ပြီးထားတာ ဆိုတော့ မေးလို့။ သူပြောတာကတော့ ကျောင်းမှာ mechanical engineering က drawing နဲနဲ ပဲပါတယ်။ တီဆွိ autocad သုံးရတယ်ဆိုတယ့် post ဖတ်ဖူးလို့ပါ။ ကျောင်းတက်ကတည်းက သူ့အိမ်ကဆန်စက်မှာတော့ လုပ်နေတာ။ အပြင်အလုပ်တော့မရတာလား မရှာရသေးတာလား မသိဘူးရယ်။ နယ်ကနေကျောင်းတက်ရတာဆိုတော့ ၁လ ၁သိန်းကျော်လောက် ၅နှစ်ကုန်လို့ တော်တော်အပြစ်ပြောခံနေရပါပြီ။ သူ့အငယ်တွေဆိုလည်း ဒေးကိုမတက်ရတော့ပါဘူး။အဲ့ဒါသူ့ကို ကူညီချင်လို့ပါ။ ကူညီချင်ပေမယ့် သေချာမသိလို့ တီတီဆွိ ကိုအကူအညီ တောင်းတာပါ။ ကျေးဇူး :)
ဘေဘီ March 28, 2012 at 8:52 PM
ထိုင်းမှာလည်းရတယ်... ၀က်သား သုံးထပ်သား
ဒီလို ဆန်ပြားနဲ့တော့ မဟုတ်ဘူး သူက တြိဂံပုံ
ဆန်ပြားလေးတွေကို ပြုပ်ထားတာ လိပ်နေတာပဲး)
ရှလွတ် စားချင်တှာ ချဉ်ချင်းတနေပြီး)
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) March 29, 2012 at 1:20 AM
ထိုင်းက ကွေ့ချားလဲ စားကောင်းတယ်ဗျ။ သူက အသားမျှင်လေးတွေနဲ့ မူယောလို့ခေါ်တဲ့ ၀က်ကြိတ်သားတွေပါထည့်တက်တယ်။
T T Sweet March 31, 2012 at 9:27 PM
အလုပ်အကြောင်းရေးရမယ်ဆို အရင် ကျောင်းတက်တုံးက အကြောင်းရေးသလို အချက်အလက်လေးတွေ မှန်ကန်စေချင်လို့ ပြန်ရှာ ပြန်ကြည့်ရပါဦးမယ်။ ဒါကြောင့် ရေးမယ်ဆို အချိန်အနည်းငယ် ကျန့်ကြာနိူင်လို့ ရေးပေးပါမယ်။ အချိန်လေးစောင့်ပေးပါလို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ Software အင်ဂျင်နီယာကတော့ ME နဲ့ သိပ်မဆိုင်လောက်ဘူး ထင်တာပဲနော်။ ME သမားကတော့ PCB တွေ ဘာတွေ ဆွဲရတော့ EE knowledge လေးတွေ နဲနဲ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ EE သမားတွေကလဲ PCB တွေ ဆွဲရတော့ AutoCAD တော့ တတ်ထားသင့်ပါတယ်။ နောက်မှ အလုပ်အတွေ့အကြုံလေးတွေနဲ့ ရောပြီး အရှည်ရေးတော့မယ်နော်။ အားပေးသူများအားလုံး ကျေးဇူးပါရှင့်။